Wayne Rooney oo isbarbardhig ku sameeyay Jose Mourinho iyo Sir Alex Ferguson – Africa Sports Network
Wayne Rooney oo isbarbardhig ku sameeyay Jose Mourinho iyo Sir Alex Ferguson
Jul 23, 2016 WARARKA 0 1187 Views By Tajuddin
Shanghai , China ( AFRICASPORTS.NET) – Kabtanka naadiga Manchester United Wayne Rooney ayaa isbarbardhig ku sameeyay maamulaha cusub ee kooxda Jose Mourinho iyo madaxii hore Sir Alex Ferguson.
Ferguson ayaa keenay Rooney , si uu uga cayaaro garoonka Old Trafford sanadkii 2004, isagoo sababay guusha iyo hantinta shan (5) koob oo (Premier League) laba (League) iyo si la mid ah (Champions League), waxa ayna kala yihiin laba horyaal oo Ingiriiska laga cayaaro iyo koobka horyaalLada Yurub.
Wayne Rooney oo 30 sano-jir ah ayaa sheegay in Jose Mourinho uu leeyahay khibrad u dhiganta tan uu leeyahay Sir Alex Ferguson, isagoo sheegay inuu aad u xiisayo, una maleynayo in tababarihiisii hore Ferguson uu la joogo xilligan.
“Waxaan imid Manchester United, waayo waxaan doonayay inaan ku cayaaro tallooyinka Alex Ferguson, sanado kadib , haatan waxaan ku cayaarayaa fariimaha iyo tallooyinka Mourinho, waan ognahay guulaha uu Mourinho gaarsiiyay kooxo ka kala dhisan wadamada Spain , Italy iyo England , waa maamulaha aan doorbidayo inaan la shaqeeyo” ayuu yiri isagoo u waramayaY wargeyska The Guardian.
Mourinho ayaa guul daradiisii ugu horeysay inta uu maamulayo kooxda Manchester United waxa uu shalay kala kulmay kooxda Borussia Dortmund oo ugu awood sheegatay 4-1 cayaar ka mid aheyd koobka horyaalLada caalamiga ee ka soconaya Magaalada Shanghai ee dalka China .
China, José Mourinho, Manchester United, Shanghai, Sir Alex Ferguson, Wayne Rooney
Chelsea manager Antonio Conte keen to sign five more players Kooxda Sunderland oo yeelatay tababare cusub
Kooxda Sunderland oo yeelatay tababare cusub
Sunderland, United Kingdom ( AFRICASPORTS.NET) - Kooxda Sunderland ayaa ku dhawaaqday in David Moyes uu noqonayo tababaraha cusub ee naadigaasi....